Nchọpụta ihe eji achọta ihe gụnyere ọgụgụ isi | ECommerce ozi ọma
Otu n'ime ngwá ọrụ nkà na ụzụ nke bụ na a na-adịbeghị anya ọganihu, bụ teknụzụ ọchụchọ anya tinyere ọgụgụ isi na ngwaọrụ mkpanaka. Teknụzụ a nwere onye na-ebugote ma ọ bụ na-ese foto ma dabere na oyiyi a, Amamịghe echiche Chọọ maka ngwaahịa ndị yiri ya maka ọrịre.
Nke ahụ bụ, ọ bụrụ na onye ọrụ na-achọ akwa sweta, naanị bulite foto nke uwe ojii ma ha ga-egosi uwe ndị yiri ya.
Ọ bụ ezie na nke a abụghị a teknụzụ ọhụrụ, ma ọ bụrụ na ọ bụ na ojiji nke ahia, na karịsịa na ahia site na ekwentị mkpanaaka. Ọ bụghị naanị maka uwe, nyocha ndị a nwere ike ịchọta ngwaahịa, akwụkwọ, ihe nkiri, CD, na ihe ọ bụla ọzọ ụdị ngwaahịa enwere ike ịchọta ya n'ụlọ ahịa. Ọ bara ezigbo uru maka ndị na-achọ otu ngwaahịa, ma ọ bụ ọbụna ịzụta n'ụlọ ahịa ndị na-eji asụsụ anyị amaghị.
Amazon gụnyere nyocha anya na ngwa iOS gị na 2014, na-enye ndị ọrụ ohere ijikọ igwefoto ha na ngwa iji chọọ ngwaahịa, na-agbakwunye nhọrọ iji tụnyere ọnụahịa nke otu ngwaahịa ahụ na ụlọ ahịa dị iche iche. Ndị ọrụ ejirila ngwa ahụ kwuo na ọ bara uru maka ịmata akwụkwọ, fim na diski kọmpat.
Iche na-gụnyere visual search na gị iOS ngwa, ọbụna na-enye ndị ọrụ ohere i scanomi a barcode ịchọ ngwaahịa na ụlọ ahịa dị n'ịntanetị, ma ọ bụ ụlọ ahịa ndị dị nso na mpaghara.
Ọ bụrụ na ị nwere ụlọ ahịa dị n'ịntanetị ma nwee ngwa kwado ahịa gị, Tụlee itinye nyocha onyonyo iji nyere ndị ahịa gị aka ịchọta ngwaahịa zuru oke, yana atụmatụ niile ha na-achọ, n'ụzọ dị mfe ma dịkwa mfe.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » eCommerce » Teknụzụ ọchụchọ anya na ọgụgụ isi
Akụkọ na netwọkụ mmekọrịta Instagram, WhatsApp na Facebook